‘समस्यै समस्याका बाबुजत महामारीको सामना गरिरहेका छौँ’ – Mission
‘समस्यै समस्याका बाबुजत महामारीको सामना गरिरहेका छौँ’
कोरोना कहरका कारण बाँकेमा कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि निजी स्तरबाट कोरोनाको सबैभन्दा बढी संक्रमितको उपचार गरिरहेको अस्पताल हो, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुर । जिल्लाको एक मात्र सरकारी अस्पताल रुपमा रहेको भेरी पछि यहाँ उपचार हुने गरेको छ । भेरी र मेडिकल कलेजले तीन प्रदेशका बिरामीहरुको उपचार गरिरहेका छन् । यो कोभिड अस्पतालको रुपमा पनि रहेको छ । शुक्रबारबाट अस्पतालले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार पनि गरिरहेको छ । स्थानीय तथा संघीय सरकारको सहयोग बिना नै अग्रणी रुपमा उपचार भइरहेको मेडिकल कलेज प्रशासनले जनाएको छ । यहाँ एक महिनामाको अवधीमा ५ सय ५० जनाको उपचार भइसकेको छ । ती मध्ये ३ सय १६ कोरोना संक्रमित निको भइसकेका छन् । ८४ जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भइसकेको छ । दुई जना कोरोना संक्रमितको डायलासिस, १४ जनाको जटिल अप्रेसन गरिएको छ । अहिलेसम्म प्रयोगशाला मार्फत ५ हजार ५ सय जनाको पीसीआर परिक्षण सम्पन्न भएको छ । अस्पतालमा हाल १ सय ३० वटा बेड रहेका छन् । अस्पतालमा अहिले १ सय ३० बेड रहेका छन् । ती मध्ये ४५ बेड आइसियू र ८५ जनरल बेड रहेका छन् । दोस्रो चरणको कोरोना महामारीको समयमा मेडिकल कलेजले गरिरहेको काम, समस्या चूनौती र कोरोना कहरका विषयमा केन्द्रीत रहेर नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरका उप–निर्देशक तथा कोरोना फोकल पर्सन डाक्टर दिनेश श्रेष्ठसँग मिसन टुडे दैनिकका शुभाकर विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
१. कोरोना कहर चलिरहेको छ, मेडिकल कलेजले कसरी काम गरिरहेको छ ?
पक्कै पनि कोरोना कहर चलिरहेको छ । हामी महामारी विरुद्ध विगत लामो समयदेखि डटेर लागिरहेका छौ । हाम्रो अस्पतालले कोरोना संक्रमण सुरु भएको केही दिन मै कोरोना अस्पतालको रुपमा व्यवस्थापन गरिसकेका थियौ । पहिले नै महत्वाकाक्षाका साथ सुरु गरो हौँ । हामीले कोभिड र ननकोभिडको समेत उपचार गर्नु पर्ने अवस्था थियो । अहिले हाम्रो तिर कोरोनाको जत्तिको महामारी छ,उत्तिकै मात्रामा अन्य विरामीहरु समेत उत्तिकै आउनुहुन्छ । यो तीन प्रदेशको मुख्य अस्पताल नै हो । अनय विरामीहरुको उपचार गर्ने । त्यसो भएर उपचारको लागि आउने सम्पूर्ण विरामीहरुको उपचार हामीले गर्नुपर्नेहुन्छ । त्यसैले सबैको उच्च मनोबलका साथ उपचार गरिरहेको हो । हाम्रो दुई वटा अस्पताल छ, एउटामा कोभिड र अर्को अस्पतालमा नन कोभिडको उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ । ५ सय ५ बेडको मेडिकल कलेजमा साढे दुई सय देखि ३ सय सम्म उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य राखेका थियौ । यति नै बेला कोरोना संक्रमितको यति चाप बढ्दो की हामीले हाम्रो मौजुदा स्रोत र साधनले धान्न नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भइदियो । हाम्रोमा अक्सिजनको चरम अभाव भयो । यतिसम्म की खुम्चिएर १ सय ५० बेडमा झर्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । लिक्विड अक्सिजन ल्याउन पनि समस्या भोग्यौ हामीले । कोरोनाको समयमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दा समेत सोचे अनुसारको सेवा दिनमा परिस्थितिले साथ दिएन । अहिले भने केही मात्रामा अक्सिजन आपूर्ति सहज हुन लागेको छ । अक्सिजन प्राप्त भएपनि माग धेरै भएकोले धान्न समस्या छ । भने जाँच धेरै छ । गम्भीर प्रकृतिका बिरामी आउने भएकोले अक्सिजन बढी खपत भइरहेको छ । अहिले जति आइरहेका छन्, सबै सिरियस नै छन् । त्यस्ता बिरामी ९५ प्रतिशत रहेका छन् । हामीले वार्ड भन्दा पनि आइसियूको सुविधा बढाउनुपर्छ भनेर २८ बेडबाट बढाएर ४५ बेड बनाएका छौँ । अहिलेको अवस्थासम्म १ सय ३० बेड कोरोना संक्रमित उपचारको लागि तयारी अवस्थामा छ ।
२. अहिलेपनि कोरोनाका कहरसँगै जुँधिरहेको अवस्था छ, पछिल्लो एक महिनामा मेडिकल कलेजले सिकेको पाठ, भोगेको समस्या र चूनौतीका विषयमा पनि अवगत गराइदिनुन ?
यो अवधिमा हामीले भोगेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको अक्सिजनको अभाव हो । यतिसम्मकी अक्सिजनको अभावका कारण विरामीहरुको भर्ना नै लिन नसकिने अवस्था भयो । केही दिन हामीले बिरामीहरुको भर्ना नै लिन सकेनौँ । यो निकै दुःखदायी क्षण हो । अक्सिजनको अभाव नभइदिएको भए अहिलेसम्म अझै बढी कोरोना बेड सञ्चालन हामीले गर्ने थियौँ । जति टिम छ, हाम्रोमा कोभिडमा जाने, उहाँहरुले अहिले पनि बिना तलब काम गरिरहनु भएको छ । सरकारी अस्पतालमा भने ड्युटी गरे बापत अतिरिक्त भर्ना हुन्छ । हाम्रोमा त्यस्तो सुविधा दिन हामीले सकेका छैनौ । यो बीच हामीले स्टार्फहरुलाई समेत मोटिभेट गर्न नसकेको अवस्था पनि देखियो । हाम्रोमा सुक्का तलब छ । त्यो पनि विगत तीन महिनादेखि तलब नै पाएका छैनन्, स्वास्थ्यकर्मीहरुले । फागुनसम्म पाएका छैनौ । अब तपाईं नै आफै भन्नुहोस यी दुई समस्या नै काफी छन् । यो भन्दैमा हामी आफ्नो जिम्मेवारीबाट कदापी पछि हटेका छैनौ । तलब भन्ने कुरा आज नभए भोली होला । तर अहिलेको महामारीमा देश नै संकटमा आफ्नो तलब भन्दा पनि सेवा भावले खटिरहेको अवस्था छ । सरकारी अस्पताल भइदिएको भए, भत्ता हुन्थ्यो होला । तर हामीलाई केही पनि सरकारी सुविधा हुँदैन । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरुको जति तारिफ गरेपनि कमी नै हुन्छ ।
३. अहिलेको फैलिरहेको संक्रमण दर र मृत्युदर हेर्दा यस्तो अवस्था अहिलेसम्म रहला के भन्नुहुन्छ ?
अहिलेको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने हाम्रोमा १ सय ३० बेड रहेको छ । ४५ बेड आइसियू रहेको छ । ती मध्ये १० बेड अझै खाली अवस्थामा रहेको छ । वार्डमा पनि १० वटा सम्म खाली रहेको छ । यो विस्तारै खाली हुँदै गएको देखिन्छ । यो हाम्रो लागि सुखद् समाचार र सन्देश हो । यसले संक्रमदर कम रहेको देखाउँछ । उदाहरणका लागि शुक्रबार ७५ जना गरिएको पीसीआर परिक्षणमा १५ जना मात्रै पोजेटिभ देखिए । पछिल्लो केहीदिनयता बिरामी हुने दर पनि कम हुँदै गइरहेको छ । अहिले बिरामीको लोड पनि घट्दो क्रममा रहेको छ । यही अवस्था रहे अबको दुई हप्तामा कोभिडलाई सानो वार्डमा झार्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ ।
४. कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार पनि शुरु भएको छ, यसको विषयमा स्पष्ट पारिदिनुहोस न ?
यसको विषयमा हामी सबै के कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ भने, शुरुमा सरकारले हामीले कोही बिरामी विपन्न छन् भने वा उसले उपचार गर्न सक्ने अवस्था नभएको खण्डमा निःशुल्क उपचार गर्नको लागि परिपत्र गरेको थियो । त्यसको लागि उहाँहरुले सम्बन्धित पालिकाबाट सिफारिस र आफूले स्व घोषणा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । उसले नेपाल सरकारको नामा चिठि लेख्नु पर्दथ्यो । सरकारको नीति अनुदार साढे तीन हजार, सात हजार र १५ हजार लिन निर्देशन दिएको थियो । हामीलाई सरकारले त्यसमा पनि ५० प्रतिशत थपेर दिएर सेवा दिन सक्ने भनेको थियो । हाम्रो अस्पताल निजी भएकोले त्यस्तो सुविधा सरकारले दिएको हो । तर हामीले थपेनौँ । राज्यले तोकेकै मूल्यमा सेवा दिइरहेका थियौ । अहिले चाँही सरकारसँग सम्झौता गरेर सुचिकृत अस्पतालले निःशुल्क उपचार गर्ने । सरकारले त्यस्तो भनेपछि हामीले पहल गयौँ । सरकारले पनि हामीलाई सुचिकृत गर्यो । त्यसैले अस्पतालले अब कोरोना संक्रमितको लागि निःशुल्क सेवा शुरु गरेको छ । शुक्रबारबाट नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा आइसियू र वार्ड जहाँ भर्ना भएपनि कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार हुनेछ ।
यसको समिक्षा गर्दा मलाई के लागेको छ भने, यो जुन हामीले घरघरमा आइसोलेसन बनाउने राख्ने भन्यौँ । यसले गर्दा बिरामीले कोरोना भनेको अक्सिजनको कमी भएर हुने रहेछ । अक्सिजनको सिलिन्डर जहाँबाट भएपनि जोहो गरेर राख्यो भने बचिने रैछ । अस्पतालमा जानै नपर्ने रैछ भन्ने गलत प्यासेज गयो । स्थानीय तहले समेत त्यही कुरालाई प्रमुखताका साथ अबलम्बन गरे । एउटा बेड र अक्सिजन सिलिन्डर भयो भने आइसोलेसन सेन्टर भनियो । यसले आम रुपमा व्यापक भर्म सिर्जना भयो । एकान्तमा बस्ने र अक्सिजनको लिसिन्डर भयो भने, कोरोना जितिन्छ भन्ने छाप बस्यो । जुन सरासर गलत कुरा हो । कसैले अहिले पनि यस्तो काम गरेको छ भने त्यो अत्यन्त भ्रामक र गलत कुरा हो । अहिले अस्पतालमा जति पनि कोरोनाका केश आउँछन् । ती सबै होम आइसोलेसनमा ७ देखि ९ दिन बसेका छन् । जुन कोरोनाको सबै भन्दा बढी प्रभावित हुने अवस्था हो । समय निकै घर्कीसकेपनि अस्पताल ल्याउने गरिन्छ । जुन अवस्थामा डाक्टरले उनीहरुलाई चाहेर पनि बचाउन सक्दैन । अहिले सरकारले प्रति पेसेन्ट दुई सय रुपमा दिने भनेको छ । यो सह्रानीय काम हो । होम आइसोलेसनमा बस्ने मानिसको चाहना सकभर अस्पताल जान नपरोस भन्ने हुन्छ । स्थानीय तहको सोच जति होम आइसोलेसनमा जति बिरामी बढे त्यति नै फाइदा हुने देखेर नै यस्तो काम गरे । होम आइसोलेसन प्रभावकारी देखिएन । डाक्टरसँग सम्पर्क अभाव भयो । होम आइसोलेसनमा बसेपनि जो सम्पर्कमा रहे स्वास्थ्यकर्मीको उनीहरु सुरक्षित नै रहे । अर्कातिर यो अवस्थामा हामीले धेरै समस्या भोग्यौ । तर सरकार र स्थानीय सरकारले हामीलाई सहयोग नै गरेनन् । समस्याका बाबजुत पनि हामीले काम गरिरहयौ । अहिले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने बेलासम्म आइपुगेका छौँ ।
यसमा विश्वव्यापी रुपमा देखिएको भनेको त्यही हो, मास्क अनिवार्य लगाउने । भीडभाड नगर्ने । सक्नुहुन्छ भने घरबाट ननिस्कनुहोस । घरमा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गर्ने । घर मे बस्दा पनि मास्क लगाउने । नुनिलो, पिरो लगायतका खानेकुरा खाने । अनावश्यक सम्पर्कबाट टाढै रहने । साबुन पानीले हाम धुने । हामीले पनि सचेतनाका बढाररहेका छौ । स्थानीय सरकारले र सरकारले पनि सचेत रहन आग्रह गरेको छ । आफू बचौँ र अरुलाई बचायौँ ।
प्रकाशित मितिः आइतवार, जेष्ठ ९, २०७८ 10:19:32 AM |
Posted in Flash news, अन्तर्वार्ता, मुख्य समाचार
Prevनेपालगञ्जमा रक्तदान सम्पन्न
Nextनयाँ सरकार गठन र संसद् विघटनसम्बन्धी पत्र राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटबाट गायब